0 Visits: 5527 | Wednesday August 22, 2018 - 11:03:13
0 Monday July 23, 2018 - 10:09:52
Wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, ayaa dhawaan socdaal shaqo ku tagay degaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool.
0 Saturday June 30, 2018 - 21:43:06
Magaalada Jilib ee gobalka Jubada-dhexe waxaa ku yaal xarumo waxbarasho oo kala duwan kuwaasoo bulshada ku dhaqan ay aad uga faa'iideystaan.
0 Visits: 27928 | Monday June 18, 2018 - 22:09:55
Mu'asasada Alkataib' garabka warbaahinteed ee Xarakada Al Shabaab ayaa soo saartay Filim cusub oo muuqaal guud ka bixinaya dagaallada mujaahidiinta ee ka socda gudaha wadanka Kenya.
0 Sunday June 17, 2018 - 12:08:33
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in duqeymo khasaara dhaliyay lala eegtay deegaanno ay dad shacab ah ku sugnaayeen.
0 Saturday June 16, 2018 - 22:15:20
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa dowladda Itoobiya la galay heshiis ay ku qaadanayso afar Dekedood oo ku yaalla bartamaha iyo koofurta Soomaaliya.
0 Wednesday June 06, 2018 - 14:45:39
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay qarax xooggan oo ka dhacay deegaan ku dhow xad beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
0 Monday June 04, 2018 - 21:14:05
0 Monday June 04, 2018 - 07:46:51
0 Sunday June 03, 2018 - 15:48:49
Xaalad deganaan ah ayaa kajirta degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan oo jimcihii lasoo dhaafay marti gelisay dagaallo sababay dhimashada 72 qof.
0 Friday June 01, 2018 - 17:58:02
Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka iyo hay'adda Kheyriga Al ixsaan ayaa wali sii wada ugurmashada dadka uu dhibaateeyay Fatahaadda wabiga Jubba.
0 Visits: 27212 | Friday June 01, 2018 - 17:56:02
0 Tuesday May 29, 2018 - 11:41:43
Hay'adda Al-ixsaan ee kheyriga ah iyo gudida gurmadka fataahadda wilaayada Jubbooyinka ayaa si wada jir ah gurmad u gaarsiiyayinka badan 300 oo qoys kuwaas oo ku saamoobay fatahaadda wabiga jubba.
0 Wednesday May 23, 2018 - 08:26:11
Gurmad hordhac ah ayaa wali kusii qulqulaya deegaannada ku teedsan Wabiga Jubba oo ay ka jiraan xaalado aad u adag.
0 Tuesday May 22, 2018 - 11:57:28
0 Monday May 21, 2018 - 16:41:25
Kumanaan qoys ayaa ku saamoobay Fatahaad uu Wabiga Jubba ka sameeyay gobollada Jubbada dhexe iyo Jubbada Hoose, biyaha wabiga ayaa xaaqay tobanaan tuulo.
0 Thursday May 17, 2018 - 12:07:33
Ciidamada Difaaca Darnah wadanka Liibiya oo ah gole ay ku midoobeen dadka deegaanka iyo Golaha Shuurada Mujaahidiinta ayaa ka hor tegay dagaallo ay soo qaadeen Maleeshiyada Khaliif Xaftar, kuwaas ka dhacay Xaafadaha Al Thuhr iyo Xiilah oo dhaca koofurta Magaalada.
0 Monday May 14, 2018 - 21:21:42
Mu'asasada Ak-kataa'ib garabka Warbaahineed ee Xarakada Alshabaab ayaa baahisay filim cusub oo aad u xiisa badan.
0 Monday May 07, 2018 - 21:23:57
0 Saturday May 05, 2018 - 10:24:43
Markii ugu horraysay dowladda Sacuudiga ayaa ogolaatay in Kaniisado ay leeyihiin dadka Kirishtaanka ah laga dhiso dhulka Xarameynka.
0 Monday April 30, 2018 - 10:54:01
0 Monday March 19, 2018 - 07:00:55
Mashruucii Sokorta warshadda Mareereey wuxuu kamid ahaa mashaariicda ugu dhaqaalaha badan dalka Soomaaliya oo Malaayiin qof ay shaqo ka heli jireen.
0 Friday February 23, 2018 - 10:50:40
Hay'adda Gargaarka Al Ixsaan ayaa howllo caafimaad lacag ka'aan ah ka fulisay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe.